Fanondranana vehivavy… : lehilahy iray tratra niaraka tamin’ny tovovavy roa saika halefa any Sina | NewsMada
Fanondranana vehivavy… : lehilahy iray tratra niaraka tamin’ny tovovavy roa saika halefa any Sina
Voasambotry ny polisy misahana “enquête specialisées” Anosy ny faran’ny herinandro teo, teny Ambohimirary ny lehilahy iray mpanondrana tovovavy mankany Sina. Mbola nisy vehivavy roa vao saika halefa tratra tao aminy. Teo ihany koa ny fitaovana sy taratasy hosoka tany amin’izy io.
Voasambotry ny polisy tao an-tranony, eny Ambohimirary, ilay mpanondrana olona. Mbola nahitana vehivavy miisa roa tao an-tranony saika haondrana any Sina. Nandritra ny famotorana azy, niaiky izy fa mpiray ombon’antoka amin’ilay tena mpandefa ireto vehivavy malagasy ireto any ivelany. “Marihina fa mbola mampiasa hosoka ireo mpanondrana amin’ny alalan’ny fampiakarana ny taona ireo tovovavy halefa. Raha vehivavy 18 taona, ataon’izy ireo 24 taona”, hoy ny filazan’ny polisy.
Nomarihin’ny polisy hatrany fa efa maro ireo tambajotra eto Madagasikara manao io asa famarotana zazavavy malagasy makany Sina io, ary efa misy vehivavy malagasy mpandray ireo amidy any an-toerana. “Io vehivavy io no mandray ny vola izay alefan’ny mpandray ireo vehivavy ireo ka mahatratra antapitrisany ny vola azony amin’izany”, hoy ny fanamafisana.
Araka ny fanazavan’ny polisy hatrany, ny alarobia 15 novambra teo, nisy olona tonga nametraka fitoriana noho ny fanondranana ankizivavy mankany Sina. “Nitaraina izy ireo fa ampanambadiana lehilahy Sinoa ireo ankizivavy ireo ka rehefa teraka, alain’ilay Sinoa ny zanany ary avy eo ampijaliany ilay reniny ka miafara hatramin’ny famoizan’aina”, hoy ny fanazavana. Tsy vitsy ireo ray aman-dreny mijaly ara-tsaina amin’ny fahoriana mahazo ny zanany koa nahatonga azy ireto nametraka ny fitoriana izany. Taorian’ny fanadihadiana nataon’ny polisy avy eo anivon’ny Service central des enquêtes spécialisées na SCES ny nahitana izao vokatra izao.
Nanomboka ny taona 2009 no ho mankaty, betsaka teto amintsika ny fanondranana olona. Anisan’ny nalaza be tamin’izany ny fandefasana olona tany Liban sy Koweit. Maro ny tovovavy malagasy tafaroboka tamin’izany ka nisy ireo nahita asa tsara, kanefa tsy vitsy koa ireo namoy ny ainy vokatry ny fampijaliana nahazo azy. Maro ny fitarainana, ary natsahatra mihitsy ny fandefasana mpiasa tany amin’ireo firenena ireo. Vao nangingina io resaka Liban, sns io, nanomboka indray ny momba ity fandefasana vehivavy hanambady sinoa ity. Efa nisy tratra tamin’izany, am-bolana vitsy, kanefa mitohy hatrany ity asa ratsy ity. Manararaotra ny fahantran’ny olona ireo mpanao ratsy. Ny tovovavy rahateo, mitady vola noho ny tsy fisiana. Ankoatra ny fitadiavana vady any ivelany, tsy vitsy koa ireo mivaro-tena amin’ny endriny maro eto amintsika eto. Mizotra mankaiza ny lalan’ny tanora?